Stainless Steel Ball ထည့်သွင်းခြင်း။
Stainless Steel Joint ၊
Stainless Steel Keg Coupler ၊
Stainless Steel Ultrasonic ရေမီတာ
Stainless Steel Water Meter အစိတ်အပိုင်းများ
Stainless Steel ရေမီတာ ကိုယ်ထည်
Stainless Steel Water Meter Connectors များ
Stainless Steel Water Meter Fitting Cover
Stainless Steel Water Meter Pressing Ring ၊
admin မှ 22-01-18 ရက်နေ့တွင်
ZF8004 Stainless Steel Hydraulic Ball Valve တွင် လီဗာ DN15~DN50 အမျိုးသမီးချည်မျှင်ပါရှိသော Customer မှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော OEM ကို အသုံးပြုထားပြီး၊ ၎င်းကို များသောအားဖြင့် ဖြုတ်တပ်ပြီး ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။အောက်ဖော်ပြပါ Yuhuan အဆို့ရှင်ထုတ်လုပ်သူသည် ဘောလုံးအဆို့ရှင်မပြုပြင်မီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို ရှင်းပြပါမည်။ဘောလုံးအဆို့ရှင်က cl ဖြစ်တဲ့အခါ...
အချိ်န်၏ မှန်ကန်သော တပ်ဆင်မှုအနေအထားနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
admin မှ 22-01-14 ရက်နေ့တွင်
ကြမ်းပြင်အပူပေးခြင်းအတွက်၊ manifold သည် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။အထပ်သည် အလုပ်မလုပ်တော့ပါက ကြမ်းပြင်အပူပေးမှု ရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်သည်။အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ၊ manifold သည်ကြမ်းပြင်အပူပေးခြင်း၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုဆုံးဖြတ်သည်။Manifold တပ်ဆင်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် မည်သည့်နေရာတွင် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်သနည်း။
admin မှ 22-01-07 ရက်နေ့တွင်
ZF8006 Stainless Steel အမျိုးသမီးချည်ကြိုးလွှဲစစ်ဆေးသည့်အဆို့ရှင် DN20 သည် ပိုက်လိုင်းအတွင်းရှိ ကြားခံအား ပြန်မစီးဆင်းစေရန် တားဆီးသည်။ကြားခံ၏ စီးဆင်းမှုနှင့် တွန်းအားကြောင့် အဖွင့်အပိတ် အဖွင့်အပိတ်ရှိသော အဆို့ရှင်ကို စစ်ဆေးသော အဆို့ရှင်ဟုခေါ်သည်။အဆို့ရှင်များကို စစ်ဆေးပါ...
Ball valve တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း။
admin မှ 21-09-22 ရက်နေ့တွင်
တစ်ခုမှာ၊ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ တပ်ဆင်ခြင်း 1. Stainless Steel ဟိုက်ဒရောလစ်ဘောလုံးအဆို့ရှင် ရှေ့နှင့်နောက်တွင် လီဗာ DN15~DN50 အမျိုးသမီးချည်မျှင် Customer မှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော OEM အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ရှေ့နှင့်နောက်ပိုက်များသည် coaxial ဖြစ်သင့်ပြီး flood နှစ်ခု၏ sealing မျက်နှာပြင်များသည်...
Stainless steel gate valves အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း။
21-08-23 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ Stainless Steel အမျိုးသမီးချည်တံခါးအဆို့ရှင် OEMs များကိုတံခါး၏အပြင်အဆင်နှင့်အဆို့ရှင်ပင်မ၏ပုံစံနှင့်အညီခွဲခြားထားသည်။ဟုတ်ပါတယ်၊ ကုန်ကြမ်းများအရ၊ ၎င်းတို့ကို Stainless Steel အမျိုးသမီးချည်တံခါးအဆို့ရှင် OEMs၊ ကာဗွန်သံမဏိတံခါးအဆို့ရှင်များနှင့်အခြားအရာများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။
Stainless Steel Ball Valves တွေက ဘာတွေလဲ။
21-08-13 ရက်နေ့တွင် admin မှ
သံမဏိဘောလုံးအဆို့ရှင်များနှင့် လူတိုင်းရင်းနှီးသည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။ စတီးလ်စတီးလ်အမြောက်အများ ultrasonic ရေမီတာကိုယ်ထည် ဂဟေဆက်ခြင်းဗားရှင်းကို မြို့၏ထောင့်တိုင်းတွင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး အသက်တာရှည်သောကြောင့် လုပ်ငန်းတွင်းရှိလူများက ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြသည်။အမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်...
21-07-07 တွင် admin မှ
သံမဏိရေမီတာသည် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်မှု၊ ဒုတိယညစ်ညမ်းမှုမရှိ၊ အက်စစ်နှင့်အယ်လကာလီများကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်နိမ့်သောအပူချိန်တွင် သံချေးတက်ခြင်းမရှိ၊ လုံခြုံစိတ်ချရပြီး အစားအသောက်သန့်ရှင်းမှုစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပြီး၊ ကြီးမားသောအကွာအဝေးနှင့် တွဲဖက်...
21-06-29 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ရေဖြန့်ဖြူးပေးသူနှင့် Manifold တို့သည် ရေစနစ်အတွင်းရှိ အပူပေးပိုက်အမျိုးမျိုး၏ ပေးဝေခြင်းနှင့် ရေပြန်ပို့ခြင်းကို ချိတ်ဆက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ရေဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ရေစုဆောင်းကိရိယာများဖြစ်သည်။ရေဝင်ပေါက်နှင့် နောက်ကြောင်းအရ ရေဖြန့်ဖြူးရေး Manifold ဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။Manifold လို့ ခေါ်တယ်..။
admin မှ 21-06-22 ရက်နေ့တွင်
Zhanfan stainless steel water distributor သည် အိမ်ထောင်စုတစ်စုနှင့် တစ်မီတာ ရေပေးဝေရေး လုပ်ငန်းများ၏ အသွင်ကူးပြောင်းမှုအရ ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော ရေမီတာတပ်ဆင်ခြင်း ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။Stainless Steel ရေဖြန့်ဖြူးသူကို စည်ပင်ရေပေးဝေရေးပိုက်ကွန်ရက်တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်...
6 ကြိမ်မြောက် ရှန်ဟိုင်းဗိသုကာ ရေသန့်ပြပွဲ
21-06-07 တွင် admin မှ
ပြည်တွင်း အဆောက်အဦ ရေပေးဝေရေးနှင့် ရေနုတ်မြောင်း လုပ်ငန်းအတွက် အရည်အသွေးမြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပြပွဲတစ်ခုအဖြစ် 2021 ခုနှစ် ဇွန်လ2ရက်နေ့မှ4ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသည့် 6th Shanghai Architecture Water Exhibition တွင် လူနေအိမ်နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နေရာများကို အဓိကထား၍ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော သောက်ရေပိုက်များ၏ ခေါင်းစဉ်သုံးရပ်ကို မျှဝေခဲ့ပါသည်။ အဆောက်အဦး...
Valve အသုံးပြုရာတွင် အဖြစ်များသော ပြဿနာများ
21-05-31 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ပထမဦးစွာ၊ အဘယ်ကြောင့် double sealing valve ကို check valve အဖြစ်အသုံးမပြုနိုင်သနည်း။check valve spool ၏ အားသာချက်မှာ force balance တည်ဆောက်ပုံ၊ ကြီးမားသော ဖိအားကွာခြားမှုကို ခွင့်ပြုပေးပြီး ၎င်း၏ ထင်ရှားသော အားနည်းချက်မှာ sealing မျက်နှာပြင်နှစ်ခုသည် တစ်ချိန်တည်းတွင် ကောင်းမွန်သော အဆက်အသွယ်မဖြစ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော...
ရေလုပ်ငန်းတွင် Stainless Steel Application နည်းပညာဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာဖိုရမ်
21-05-27 ရက်နေ့တွင် admin မှ
မေလ 21 ရက်၊ 2021 ခုနှစ် (တတိယအကြိမ်) ရေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် Stainless Steel Application Technology ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာဖိုရမ်ကို Wuxi တွင် အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ဆွေးနွေးပွဲကို နိုင်ငံတကာ နီကယ်အသင်း၊ Donghua ၏ ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံနှင့် အင်ဂျင်နီယာကျောင်းမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါသည်။
© မူပိုင်ခွင့် 20102019 : All Rights Reserved.